Iwewe wakapusa sewe? : Martin Vrijland
Iwewe wakapusa sewe?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we2 September 2019	• 7 Comments
Iwewe wakapusa sewe? Zvakadiniko? Nezvechokwadi chiri nyore chekuti anenge wese munhu akakomberedza achiri kutenda kuti zvematongerwo enyika inyaya yakavimbika. Vanhu vanonyatsofunga kuti democracy inovapo. Zvakanaka ungafunga:Zvakanaka, ndinotenda zvakare. Zvinogona kunge zvisingagare zvichienda nenzira yazvinofanira kuita, asi isu tinogara chaizvo mukuzvitonga". Zvino ndingakubvunza iwe kuti uenderere kunamatira musoro wako mujecha nyoro nyoro uye neNetherlands yose? Kana kuti iwe uchiri kuverenga zvishoma zvishoma, nekuda kwekusagadziriswa kwako kwekuda kuziva?
Inguva chaiyo yekuona nyika sezvazviri. Maonero enyika yako ane zvakakwana ruvara. Kubva pane kubarwa kuenda ku 'pano uye ikozvino' iwe wakarongedzwa neyepasi rose zvisiri izvo. Izvo zvinotanga nevabereki vako vakazvirongedza uye vakachinjira purogiramu yavo kwauri. Kunyangwe dai vanga vachipandukira chechi yavo kana bato rezvematongerwo enyika. Zvimwe ivo pachavo vakachinja kubva kuPvdA kuenda kuGroenlinks kana ivo vaive hippies chaiyo.
Iwe wakarongedzwa hupenyu hwako hwese ne worldview yakatarwa nedzidzo, media, mimhanzi, mafirimu, magazini, radio, internet, Facebook, zvichingodaro. Kana iwe zvino uchifunga:Ehe, zvine musoro. Tese tinogara munyika imwechete, saka isu tese tinoona zvimwe kana zvishoma zvinhu zvimwechetezvo. Zvakawanda kubva pakona dzakasiyana; kana iwe wakaberekerwa mune imwe nyika, asi isu tese tinogara munyika imwechete". Inogona kunge iri nguva yekuti iwe uone kuti zvese izvo maziso ako nenzeve zvakadzora mukati mehupenyu hwako zvinongotarwa neboka diki. Zvichida mamirioni avanhu anoshandira iyo kirabhu nyowani, asi iwo mamirioni avanhu anoenderana nebasa ravo uye ivo vese vanoshanda pane chidimbu chidiki zvekuti havatarise iwo mufananidzo muhombe. Asi pamusoro pezvose, ivo pachavo vakagadzirirwa kubva pazera rechidiki iro ravasiri kuziva zviri nani uye, sewe, vanotenda mune iyi yenhema yemanyepo.
Iwe pamwe unotenda kuti dzimba dzeumambo hadzina zvekutaura. "Dzimba dzeumambo dzinongoitirwa mhemberero. Ivo vane yakakosha kushambadzira basa, nekuti dzimwe nguva vanoenda kune kutengeserana mishoni kune imwe nyika uye ipapo ivo vanotora mamaneja kubva kumakambani makuru kuti vadzoke nemabhenji makuru. Vakakosha kwazvo mune izvi. Ivo vanonyanya kubatsira nyika yedu.'Ini ndakatsanangura mufananidzo wako we mhuri yehumambo yeDutch? Kana iwe uri mukadzi, iwe ungangodaro wakamborota nezveCinderella uye muchinda ari pabhiza jena, uye amai vako vangangodaro vakatarisa goridhe rinotakura uye Zuva raPrince paTV rine girazi reorenji rinovava. Ndichiri kukwanisa kusheedzera zvinotevera zvakare uye zvekare? Iwe wakarongedzwa nemufananidzo uyo usingapindirani zvachose neicho chokwadi.
Mumiriri wega wega, gweta, musoja, mushandi wehurumende, mutongi, gurukota, mapurisa anoshamisa anoongorora (BOA) - zvichingodaro - anopika kutendeka kune korona. Saka pamhuri yehumambo. Ndivanaani siginecha iri pasi pemutemo wese? Ehe, izvo zvemambo. "Ehe, asi iwo iwo mitemo yakaitwa kuburikidza nemadimikira maitiro uye pane zvakawanda zvekukurukura pamusoro peizvozvo uye pakupedzisira iwe uchauya nechimwe chinhu chakarongedzwa maererano nechibvumirano pakati pemapato makuru ezvematongerwo enyika. Uye mapato iwo anomiririra izwi revanhu vachitevera sarudzo dzesarudzo". Uchiri kuzvitenda izvo, handizvo? Une makore mangani? Masangano mangani awakamboona? Asi uchiri kuzvitenda?
Iwe unotenda zvakare kuti nhaurwa paredhiyo neTV, senge naJeroen Pauw, Eva Jinek kana DWDD, ndeyechokwadi? Iwe hautendi kuti izvi zvinogona kutungamira kune zvishoma kutungamira? Une chokwadi here chekuti vanhu avo vari patafura havasi pachinangwa ipapo uye kuti nhaurirano iripo chete yekusimbisa chitarisiko chekutsoropodza kana kubvisisa nhaurwa kubva kumubvunzo chaiwo?
Isu tinotenderwa kwazvo kunatswa, ndinofanira kubvuma. Semuenzaniso, ini ndaiziva kubva pakukwira kweTierry Baudet's foramu for Democracy (FvD) kuti iyi yaive kudzidziswa kwakasimba kwesimba. Mumwe munhu anogona kupokana nekuvimbika. Ukaona chirongwa chekukurukurirana paTV, unonyatsofunga kuti ndezvechokwadi uye kuti pakupedzisira pane mumwe munhu anoshinga kutsoropodza zvakanyanya. Kwete kurova chipfuva changu, asi ndiri kungokuudza izvi semuenzaniso. Mushure mezvose, ndakanga ndafungidzira kuti kusimuka kweFvD kwaingova uye chete kungoda kupidigura kushoropodzwa munharaunda, nekuchibatanidza neiyo 'kurudyi kufunga, kurangana, kusarudzika uye kushamwaridzana nevanhukadzi', uyezve kuisa bhomba mudenga. kuseta kaviri pasi. Pari zvino tiri kuona maitiro akafanana pasi rese. Verenga usati ichi chinyorwa zvakakwana.
"Yakanakisa Vrijland, kutsoropodza uku kwese, asi chii chatinofanira kuita ipapo?"Kana iwe ukandibvunza uye kutanga, inguva iyo yaunotanga chaizvo kuona kuti mufananidzo wako wepasi inongova mufananidzo wekunze zvachose: mufananidzo wakarongedzwa. "Ehe, zvakanaka uye!? Ini ndinorarama munyika ino, saka zvine musoro?"Ehe, zvine musoro, nekuti tese takaitirwa zvirongwa." Izvi zvinoreva here kuti ndizvo zvakanaka? "Ehe, asi ini handidi kuve murovorobho futi. Rega ndirambe ndichitora chikamu nevamwe vese!”Unogona, asi une fungidziro yekuti nyika iri kuita zvakanaka chaizvo? Ini handisi kutaura nezvemapati aya akanaka aunoshanyira mumwaka wezhizha uye iyo yakanaka 2 mavhiki ezororo uye zvese izvozvo doro nezvimwe. Ndiri kutaura nezvemafambisirwo epasi rose maererano nekubhadhara mutero, nharaunda, hondo, zvirwere nezvimwe. Iwe unofunga kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here uye kuti Netherlands zvirokwazvo inyika yakanaka yakanaka ine chimiro chakanaka.
Ehe, pamwe iwe uri mune iyo tsika yekutenda: "Isu maDutch tine yakanaka kwazvo nzira yemumhepo muEurope yese. Isu tine mitemo yakanaka kwazvo, seyenzaniso, nyaya dzekuvaka, tine zvakanaka hutano hwekuchengetedza munharaunda uye huwandu hwakanakisa hwemhando. Isu tiri akanaka mabhizinesi epasi rose uye zvematongerwo enyika uye accounting zvakanakisa". Ini handitombotarisira (kana iwe uchifunga kudaro) kuti iwe wakazopedzisira wave pano pane saiti zvachose, asi unogona kuva muverengi iyeye. Ivo vanhuwo zvavo vanonyatsotenda mune izvi vanowanzoomerwa zvakanyanya kugadzira masangana uye mazhinji muNetherlands ari pane antidepressants, asi kudada nekuziva kuti chimwe chinhu chisina kunaka kumwe kunogogona kuve chiratidzo che'varanda vakanyanya kunaka '. Kunyangwe hazvo kupera simba kuri pedyo: isu tinoramba tichikwiza mireza yeoreji paZuva raPrince uye tinoramba tichitenda muchimiro chinoisa kunetsa zvakanyanya patiri.
Pfupiso ipfupi kwazvo yandinogona kukupa, yaungangoda kuwana kusvika kwauri, ndeiyi:
Yako worldview ino pendwa neboka diki rine simba pamusoro dzese dzidzo uye midhiya uye inobata kunyepedzera kwerusununguko rwekusarudza pasi pezita rorusununguko. Vezvematongerwo enyika vese vakadzidziswa zvakanaka vatambi vanoziva maitiro ekupindura kune izvo zvinodiwa uye zvinonaka zveruzhinji. Midhiya inogona kupenda iwo makara uye kubatsira kuisa mumapoka. Midhiya nemagariro enhau aripo kutungamira maitiro ako uye kukanda vhoti hachisi chinhu chinopfuura chiyero chekuti maitiro ekunyengera anoshanda sei. Nhau dzezvemagariro dzinoongororwawo neuto rese re 'reaguurers' vangangove vanonzi Inofizieller Mitarbeiter mune yaimbove GDR. Kuita kwe Facebook ne Twitter kunowanzo dzorwa nemauto, ayo anovanda kumashure deepfake profiles. Mufananidzo wako wepasi rino wakarongedzwa munguva izere neredhiyo, magazini, radio, TV, mafirimu, mimhanzi, nezvimwe. Iwe unogara mune imwe pamwe chete Trumanshow; chokwadi chenhema.
"Ini handitendi muVrijland ipapo. Izvi zvinondiremera kwazvo. Iwe hausi kuzondiudza kuti vanhu vazhinji vanoita chikamu nenhema". Vanhu ivavo havazive kuti vari kubatana, nekuti vanongo zadza nzvimbo diki-diki uye hapana mumwe wavo anotarisira iwo mufananidzo muhombe. Kana iwe uchizonyatsopinda mukati mazvo (semuenzaniso kuburikidza nezvinyorwa zviri pawebhusaiti ino), iwe unozoona kuti yako worldview yakanga isiriyo chaizvo. Tarisa uone, nekuti iwe unogonesawo kukwezverwa mumambure echengetedzo enharaunda yechokwadi. Iyo diki yesimba remasimba iyo inodzora nyika zvakare ine kupikiswa muhomwe yayo. "Nzira yakanakisisa yekudzora kushorwa ndeyokutungamirira iwe pachakoChikwereti chavo here. Ini ndakarondedzera izvo, pakati pezvimwe zvinhu ichi chinyorwa.
Kana iwe wakatora dambudziko kuverenga zvinyorwa pasi pebhuruu zvinongedzo (ivo vanongova 4), saka tinouya kumubvunzo kuti tinofanira kuona sei pasi. Icho chokwadi chaicho chakavakwa sei kana mhedzisiro yacho iri chaiyo kuti isu takachengetedzwa mune yerudzi rwezviroto nguva ino yese? Ini ndanyora zvinyorwa zvakati wandei pachinhu ichocho, asi iwe uchazowana zvakanyanyowanda pasi pemusoro unoti 'Rufu runoponesa ruzivo rwehupenyu hwako hwazvino' uye pasi iyi link. Ndine chokwadi chekuti urikuita zvese kuedza kuratidza izvi kwauri pasina kufarira. Zvakatozonditorera mari yakawanda muhupenyu hwangu. Iko hakuna kukurudzira kwechinamato shure kwayo (ndinotenda kuti chinamato ndeyokudzora pfungwa) uye hapana kukurudzira kwemari shure kwayo. Ini ndinoita izvi nekuti ndinofunga ndiyo nzira chete yekuchinja. Naizvozvo, verenga zvinyorwa zviri pasi pebhuruu zvinongedzo uye rega ini ndinzwe zvaunofunga.
Vhura tsamba kuna hurumende uye nhepfenyuro: kuregera pamwe chete uye kupomerwa mumatare evanhu
Iwe unogona kuunza shanduko uye zvisarudzo zvako zvakashata!
Victor Mids Gore Idzva Rakatsanangurwa uye kuti iwe zuva nezuva une Mindf * ck yakadaro sei
Mark Rutte ari pasi pemoto pamusoro peGroningen gesi yakagadzirwa paPauw naJinek
Tinoenderera mberi kutora Trumanshow yezvematongerwe enyika uye vezvemitori zvakanyanya
Tags: Featured, vezvenhau, zvematongerwo enyika, Trumanshow, manyepo. chokwadi
Dick Klein Oonk akanyora kuti:
Chimwe chinyorwa chakajeka, Martin. Ini ndinogona kubvumirana nazvo zvizere. Naizvozvo yakagoverwa paTV neFB.
Zvimwe zvakanaka kutanga watanga kuziva kuti sezvakangoita kuUK, chimiro chedu hachisi chegutsaruzhinji asi chebumbiro remamongi. Mambo / mambokadzi ane basa mune izvi. Muenzaniso wakanaka uri kuUK uko Johnson anonzi akumbirawo kumiswa paramende. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu here kana kuti mamiriro ezvinhu aya ane mavara kwatiri? Zvingave kuti bumbiro raitwa ipapo iyo inonzi Privey Council yafunga kumisa paramende. Ichi chiitiko chine musoro kupfuura icho chatapihwa.
Pamwe haasvike apo Martin anotsanangudza iyo yese theatre zvakakwana, asi zvakadaro ……. Ndakafunga kuti yaive muenzaniso umo isu tese tinoratidzwa nemufananidzo unogona dzimwe nguva kusava chokwadi.
Ona uyo akagara pachigaro pachigaro muBrussels (pinda 'Ursula' mumunda wekutsvaga pane ino webhusaiti).
Iyo arristocracy inotonga uye yakahwanda kuseri kwekuonekwa kwegutsaruzhinji (pachena kupesana) inotengeswa nevatori venhau (michina yekuparadzira) nevatambi vatinowanzoidza "vezvematongerwo enyika".
Iyo Brexit yakangotangwa kuratidza yega yeEurope kuti kurwisa-kudyidzana kunotungamira mukutambudzika uye kurangwa kwemari KURE uye kuunza iyo pound neuro kune iyo chikamu chakafanana.
Mutambo unotamba kwechinguva: chekutendeseka.
Johnson anogona kuva akaomarara kwechinguva.
Haisi chinhu chinopfuura kuita.
Izvo zvavanoita nguva dzese kukanda bhora netariro yekuti tichazvigamuchira. Isu takagamuchira zvakanyanya muzvizvarwa zvichangopfuura zvekuti isu parizvino tinogara munyika isina kukwana uye isina kuringana
Chero bedzi mauto (achitengesa chiGreek mweya) achiri kurwira mambo wavo (wechitendero), kurwa kucharamba kuripo. Ndeava vakakuvadzwa vanopa simba rakashata. Hapachina kutora chikamu mumhemberero dzekurangarira, kutarisa simba rako pano uye ikozvino.
Unyengeri (kunyengera) kwatinowira zvakaramba zvakapfuura. Izvo zvinonzi zvivi, zvivi zvenguva 😉
Zvakanaka kuti isu tiri demokrasi yandisingatendi kwenguva yakareba, isu tinogara munzvimbo yematsotsi.
« KUSVIRA: piritsi rekuvandudza ichokwadi! 80 Makore-makore murume akomana kekutanga kumedza mushure mekuyedzwa kumhuka
Iyo Brexit nyaya inogara yakave chirongwa chakatemerwa »
Total Visits: 12.414.503
Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wiersum uye zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
Martin Vrijland op Pachave nehondo pakati peUS neIran nekukurumidza zvikuru izvozvi?
chris-mwana op Pachave nehondo pakati peUS neIran nekukurumidza zvikuru izvozvi?
SandinG op Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wiersum uye zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
Camera 2 op Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wiersum uye zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?